Wax ka Ogow Sababta Uu Guuleed Isaga Fogeeyay Musuqii Hareeyay Doorashadda Cadaado – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Wax ka Ogow Sababta Uu Guuleed Isaga Fogeeyay Musuqii Hareeyay Doorashadda Cadaado
War qoraal ah oo kasoo baxay maamulka Galmudug ayaa eedeyn loogu jeediyay wakiilka gudiga xalinta khilaafaadka ee ku sugan magaalada Cadaado ee xarunta KMG ah ee maamulka Galmudug.
Qoraalka kasoo baxay maamulka Galmudug ayaa lagu sheegay in wakiilka gudiga xalinta khilaafaadka uu ka shaqeynayo arimo dhibaato u horseedi kara doorashada iyo shacabka magaalada Cadaado, sida qoraalka lagu sheegay.
Gudiga Khilaafaadka ayaa u muuqdo mid labo u kala jabay, waxaana sidoo kale muuqata ineysan iska warheyn wakiilada gudiga ee deegaanada maamul goboleedyada iyo xubnaha gudiga ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Qoraalka Galmudug kasoo baxay ayaa u qornaa sida hoose:–
Annagoo ka amba qaadeyna habsami usocodka geedi socodka doorashooyinka iyo in doorashooyinku ay ku dhammaadaan si nabad ah oo xasilloon ayaa Maamulka Dowlad Goboleedka Galmudug wuxuu dacwad liddi ku ah Madaxa Wakiilada Guddiga Xallinta Khilaafaadka ee ku sugan Galmudug u gudbiyey Gudoomiyaha Guddiga Xalinta Khilaafaadka.
Kadib markii maamulku uu arkay in xubintaas wakiilka ka ah Guddiga Xalinta Khilaafaadka ay ku dhaqaaqday arrimo kabaxsan waajibaadkii shaqo, kuwaas oo qas iyo iska hor imaad ku abuuray bulshada, caqabado iyo turaan turooyinna ku ah habsami u socodka hawlaha doorashooyinka.
Hadaba, annagoo ka duulayna arrimahaas waxaan Gudoomiyaha Guddiga Xalinta Khilaafaadka ka codsaney inuu nalagala laabto xubintaas nooguna soo badalo dad aan wada shaqeyn karno.
Dowlad Goboleedka Galmudug waxay cadeyneysaa, in ay diyaar u tahay in ay iskaashi buuxda layeelaneyso dhammaan Guddiyada loo igmaday doorashooyinka gaar ahaan Guddiga Xalinta Khilaafaadka, waxayna guddiyadaas ka rajeyneysaa in ay dhawraan kuna shaqeeyaan waajibaadka shaqo ee loo xilsaaray.
Dhammaad Xafiiska Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug.
Previous: Xog:Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo labo u kala qeybsamay, qoraalo is burinaya oo ka soo baxay
Next: Yaa ku Soo Baxay Doorashadii Aqalka Hoose Ee ka Qabsoontay Baydhabo